IVerizon Media yethula amakhono amasha weplatifomu aklanyelwe ukuguqula isipiliyoni sokusakaza bukhoma | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » IVerizon Media yethula amakhono amasha weplatifomu aklanyelwe ukuguqula isipiliyoni sokusakaza bukhoma
IVerizon Media yethula amakhono amasha weplatifomu aklanyelwe ukuguqula isipiliyoni sokusakaza bukhoma
E-LOS ANGELES (Septemba 16, 2020)I-Verizon Media imemezele uchungechunge lwezithuthukisi ezintsha zeMedia Platform ezenzelwe ukuguqula ulwazi lokusakazwa bukhoma. Lokhu kufaka phakathi amakhono amasha amasha ahlinzeka ngokuzibandakanya kwabalandeli okujulile kwezemidlalo ebukhoma nezinsizakalo ezibhekana nazo zonke izidingo zokusakaza. Ngokwengeziwe, inkampani yethule ukuhlanganiswa kokuqala kweSmartplay Prebid neVerizon Media Ad Platforms 'OTT Smart Auction.
Amandla wesikhathi sangempela abuyisela kabusha izinhlelo ezibukhoma futhi alethe izethameli ndawonye
IVerizon Media isebenzisane nePhenix Real Time Solutions, ishada nenethiwekhi yomhlaba wonke yeVerizon Media, i-edge computing, kanye nobuchwepheshe bokufakwa kwezikhangiso ngobuchwepheshe bokusakaza besikhathi sangempela bukaPhenix ukunika amandla ukubambezeleka kwesekhondi lesibili kwezemidlalo ebukhoma esikalini. Leli khono belibaluleke kakhulu ekwakhiweni kwezinsizakalo ezintsha ezidingwa abasakazi, abanikazi bamalungelo, amaqembu ezemidlalo namaligi ukuletha ezemidlalo bukhoma enkundleni nasemakhaya abantu.
Okokuqala, ukubukwa kwamakhamera amaningi kwenza imicimbi yezemidlalo ekude ifane nokuhlangenwe nakho kwendawo enekhono lokubona imidlalo evela kunoma iyiphi indawo, ifaka abalandeli esenzweni. Ukusakazwa kwesikhathi sangempela kunikeza ababukeli ngokuhlangenwe nakho okusha komphakathi 'kokubuka ndawonye' okusha, njengokubuka ngokubambisana imifudlana ebukhoma evumelanisiwe, inhlebo yomdlalo, nokubheja, okuvumela abalandeli ukusingatha amaphathi wokubuka wangempela nomndeni nabangane. I-Yahoo Sports iyisibonelo sokuqala sekhasimende leVerizon Media lisebenzisa lezi zici zokusakaza zesikhathi sangempela.
"Ubhadane lomhlaba lunqunyelwe ukufika kwabantu emicimbini emikhulu, kepha abalandeli bezemidlalo bahlala belambele imidlalo ebukhoma," kusho u-Ariff Sidi, oyiGeneral Manager kanye neChief Product Officer, iVerizon Media. "Abasakazi bezemidlalo namaqembu basebenza kanzima ukubandakanya abalandeli babo bokuqina nokugcina ukuzibandakanya nokwethembeka lapho bebhekene nezinketho zokuncintisana ekhaya."
Ukuhlela nokuthengiswa kwandisa ukufinyelela kokuqukethwe
IVerizon Media iphinde yamemezela ukutholakala okujwayelekile kokushicilelwa kwesiteshi nokuhlanganiswa, okuvumela izinhlangano zezindaba ukuhlela nokuhlela iziteshi, ezingasetshenziswa zihlanganyele ngqo ku-Facebook, Twitter, YouTube nakuTwitch. Ngokubambisana, abanikazi bokuqukethwe banokufinyelela kuzithameli ezibaluleke nakakhulu ukufinyelela ngokuhamba komsebenzi okukodwa okwenziwe lula.
USidi uthe, “Isimo se-OTT siya ngokuya siyinkimbinkimbi, ngokubukwa kwesibukeli kwehlukaniswa ngezindlela eziningi ezandayo. IVerizon Media isiza amakhasimende ayo ukuthi afinyelele kwinani elanda njalo lezindawo zezethameli ukukhulisa inani lokuqukethwe kwazo futhi zikhiqize amathuba angeziwe okwenza imali ngalezo zingxenyekazi. ”
I-Managed Slicer njengoba i-Service isunduza ama-feed bukhoma ngokushesha futhi inciphisa izindleko zabahlinzeki bokuqukethwe
I-Managed Slicer njengesevisi yehlisa umthwalo wokusebenza ohlotshaniswa nokuphatha ukunikela okungaphezulu kakhulu kweziteshi, ukutholwa, nokungeniswa kwabasakazi nabanikazi bokuqukethwe. Abasiki abaphethwe bangamukela ukuphakelwa kwevidiyo kwe-IP noma kwe-SDI futhi bangahlinzekwa esikhungweni sedatha yokuqoqa, iphoyinti lokuba khona kweVerizon, noma efwini. Lapho sekusunguliwe, okuphakelayo komugqa wesiteshi kuhlolwe ngokuphelele futhi kugcinwe yiVerizon Media, kunciphisa umthwalo wokuxhaswa wamakhasimende.
USidi wengeze wathi, "Wonke amakhasimende anokuhamba kwevidiyo okuhlukile, futhi isilayi sinikeza izinketho eziningi zokuthi zingasebenzisana kanjani futhi zithole isignali yevidiyo yazo kuVerizon Media Platform. Abadali bokuqukethwe bafuna ukugxila ekudalweni kokuqukethwe, ngakho-ke kuya ngokuya kuguqula ukuhamba komsebenzi kuye efwini kanye nomsebenzi wokusebenza kubahlinzeki beplatifomu yamavidiyo. ”
I-Smartplay Prebid ne-OTT Smart Auction ziletha imithombo emisha yokufunwa kohlelo ku-VOD nakubashicileli abasakaza bukhoma
I-Smartplay Prebid ubuchwepheshe obusha bokufaka isikhangiso bevidiyo yefomu ende enamakhefu ezikhangiso zesitayela se-TV. Inika amandla ophathina bokufuna ukubhida esikhaleni sesikhangiso ngasikhathi sinye futhi lawo mabhidi ahlolwe eceleni kokunye ukuthengwa kwesikhangiso, kusetshenziswa ubuchwepheshe obuvulekile bomthombo ovulekile. Isigaba se-Ad Platforms ngaphakathi kweVerizon Media sisanda kwethulwa Indali ye-OTT Smart, Isixazululo esifana nekhanda sokubhida sabashicileli be-premium OTT eletha ukukhangiswa kwevidiyo okuhleliwe kusuka emithonjeni eminingi yemfuno. I-OTT Smart Auction yisisombululo sokuqala embonini ukuhlanganisa ne-Smartplay Prebid, futhi ngokubambisana basebenzela ukushayela imali ephezulu yezikhangiso zabashicileli bokuqukethwe be-premium
“ISmartplay Prebid ne-OTT Smart Auction inika abasakazi ithuba lokukhetha imithombo yohlelo ngokunyusa amanani okugcwalisa nokwenza ngcono isivuno,” kwengeza uSidi. "Ngaphezu kwalokho, idatha ekhiqizwa yi-Smartplay inikeza abanikazi bokuqukethwe ukubonakala okukhulu ekusebenzeni nasekusebenzeni kwesikhangiso, okubavumela ukuthi basebenze nabalingani abafuna ukuthuthukisa nokwenza ngcono amasu okwenza imali."
IVerizon Media izobe ixoxa ngamakhono wepulatifomu amasha ngokujula ngesikhathi sewebhu yayo ye-OTT Trends and Solutions ngoLwesibili, Septhemba 22. Sicela uchofoze lapha ukuze ubhalise.
Ukuze ufunde kabanzi, vakashela verizonmedia.com/media-platform.
Ukuthinta zonke izisekelo: I-NESN ikhetha ukushintshwa kokulethwa kokufunwa okuphezulu kokuqukethwe kwe-TV kanye nezingcingo ezizayo ze-4K HDR - Septemba 17, 2020
I-LTN Global kanye ne-Amazon Web Services (AWS) yandisa ukusebenzisana kokusebenzelana okungenamthungo phakathi kwamanethiwekhi - Septemba 17, 2020
IVerizon Media yethula amakhono amasha weplatifomu aklanyelwe ukuguqula isipiliyoni sokusakaza bukhoma - Septemba 16, 2020
Ngaphambilini: IStudio FAMU Isebenzisa Isixazululo se-Quantum sokufinyelela okukude nokulondolozwa kokuqukethwe
Olandelayo: I-Dejero Transforms KNSD-TV ne-KUAN-LD's Mobile Broadcast Truck ibe yi-Mobile TV Station